January 2012 | မိုးသကျဦးလှငျ
မနေ့က ဘယ်မှ မသွားဖြစ်ပါဘူး..။ ဆရာမ Алёна (အာလျော့နာ)က တနင်္လာနေ့ပိတ်ပေးတဲ့အတွက်
ကြောင့်ပါ..။ သူငယ်ချင်းတွေက ဟိုဘက်ကျောင်းကို သွားကြတယ်..။ အခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်
တည်း ပျင်းပျင်းနဲ့.စာတွေဖတ်နေတယ်..။ အပြင်မှာလဲ နှင်းတွေချည်းပဲ..မှတ်မှတ်ရရ မော်နီတာပေါ်က
Weather Gadget ကိုလှမ်းကြည့်တော့..-16 ဒီဂရီဆဲလ်ဆီးယပ်စ်တဲ့.. ဘေးနားက ကုန်တိုက်မှာ ဖုန်းပိုက်ဆံ
ဖြည့်ဖို့တောင် မသွားချင်တော့ဘူး..။ နေပူနေပါလျက်နဲ့ ဒီလောက်တောင်အေးတာကိုအံ့သြမိပါတယ်...။
Desktop ကလည်း ရှုပ်ပွနေတာပါပဲ.. ရှင်းလည်းခနပဲ .. ပြီးရင်ကျွန်တော်က လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်ပြီး
ကျောင်းက တစ်ရက်ကို သုံးနာရီပဲ သင်ရပါတယ်..။ ဆရာမ (၂) ယောက်ရှိပါတယ်..။ဆရာမ အီရီနာနဲ့
ဆရာမ အာလျော့နာပါ..။နှစ်ယောက်စလုံးက ငယ်ငယ်လေးတွေပါ.. ။ အစ်မသကြားလုံး(candy)တို့နဲ့တူတူ
ပါပဲ..။ 88ဖွားတွေပါ..။ကျွန်တော်မြန်မာတွေက ဆရာဆရာမဆို လေးစားကြတော့ သူတို့တော်တော်အံ့သြ
ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ထဲမှာတင် ဆရာမနဲ့ အသက်တူတွေ.ဆရာမတွေထက်အသက်ကြီးသူတွေပါနေ
ပေမယ့်..လပြည့်နေတုန်းက ဆရာမတွေကို မြန်မာထုံးစံအရ ကန်တော့ ကြပါသေးတယ်..။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆ
ရာက ဆရာ မဟုတ်လား.။
ကျောင်းမှာကတည်းက ဗိုလ်လောင်းဘ၀ကတည်းက နာမည်ပြောင်ပေးတဲ့နေရာမှ ဒီပလိုမာဘွဲ့ရ
ထားသူဆိုတော့. ကျောင်းစဖွင့်ကတည်းက ဆရာမတွေကို နာမည်ပြောင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်.။
အရပ်ရှည်ရှည် နဲ့ အီရီနာကို.. အရှည်ကြီး လို့ ခေါ်ပြီးတော့.. ပိန်ပိန်သေးသေး.အာလျော့နာကိုတော့..
ဆရာမ ဗလကြီး လို့ခေါ်ကြပါတယ်...။(ပုံထဲမှာ ပုဆိုးတွေဝတ်ထားတာက လပြည့်နေ့ ဆရာမတွေကို ကန်
တော့တဲ့နေ့မို့လို့ပါ.. ။မြန်မာ့ရိုးရာပွဲတော်နေ့များဆိုရင်. ကျောင်းပိတ်ပေးပါတယ်..)
ဒီနေ့ ကျောင်းသွားတော့ အာလျော့နာအချိန်ပါ....။ ဆရာမက စာသင်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်..။
နားမလည်ရင်နားလည်အောင်.အမူအယာအမျိုးမျိုးလုပ်ပြတတ်လို့... သဘောကျကြပါတယ်.။ အီရီနာနဲ့
တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ....။အီရီနာကလည်းစာသင်ကောင်းပေမယ့်.. အင်မတန်ရှက်တတ် ကြောက်တတ်
သူပါ.. ။ကျောင်းသားကိုစာမေးရင်တောင် ရှက်နေတတ်လို့ မနည်းပြောထားရပါတယ်..း)
ဒီနေ့မနက် ကျောင်းသွားတော့. ပြတင်းပေါက်မှာ ရေတွေခဲပြီးကပ်နေတယ်..။း)
အာလျော့နာ.. စာစစ်နေတုန်း ခိုးရိုက်ထားတာ.. ဟိဟိ..(မိသွားရင် သူငယ်တန်းကလေးကိုဆူသလိုဆူခံရ
ဆရာမက ဒီနေ့စာသင်ရင်း ကျွန်တော် တို့ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်အကြောင်းပြောပြပါတယ်..။ ဟန်ဂေရီ
နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့သီချင်းလို့ ပြောပါတယ်..။ သီချင်းနာမည်က Gloomy Sunday ပါတဲ့.. ။ကျွန်တော်က
အတန်းထဲမှာ ဆရာမပြောသမျှ နောက်က လိုက်လိုက်ထောက်တတ်တဲ့သူဆိုတော့. ဆရာမက ကျွန်တော့်
ကျွန်တော် အတန်းက ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ..အဲဒီသီချင်းကို ရှာပါတယ်..။ နားထောင်ကြည့်တော့ ရှေး
သီချင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်.။ အဲဒါနဲ့ Wiki ကောက်လှန်ကြည့် တော့..အဲဒီသီချင်းရဲ့ထူးခြားမှုကိုတွေ့တော့
ဟန်ဂေရီလူမျိုးသီချင်းရေးဆရာ..Rezső Seress က၁၉၃၀ မှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..။ဒါပေမယ့်.ဒီသီ
ချင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ သံသယရှိတဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုများ.. အမေရိကန်နဲ့ ဟန်ဂေရီ ၂ နိုင်
ငံလုံးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်..။ ဘယ်လောက်တောင်များလဲတော့ ဖော်ပြမထားပါဘူး.။ ဥပမာ.. ဒီသီချင်းဖွင့်
လျက် ကြိုးဆွဲချ သေနေတာမျိုး.၊သီချင်းဖွင့်ထားရင်းနဲ့ တိုက်ပေါ်က ခုန်ချသွား တာမျိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်..။ အဲ
ဒါနဲ့ အဲဒီသီချင်းကို တာဝန်ရှိသူတွေက ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှုကနေ ပိတ်လိုက်ရပါတယ်..။ဟန်ဂေရီအစိုးရ
ဟာ ဒီသီချင်းကို ပိတ်ပင်ထားပေမယ့်. ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပါ ဒီသီချင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဟာကူးစက်သွားပါတယ်.။
ဒီသီချင်းကိုဖွင့်ထားတဲ့ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ထဲမှာ လူငယ်လေးတစ်ယောက် မိမိကိုယ်ကို ပစ္စတိုနဲ့ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး
နောက် နောက်ထပ် နိုင်ငံ (၃) နိုင်ငံကအဲဒီသီချင်းဖွင့်ခွင့်ကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာ ကပ်ရော
သီချင်း ဖြန့်ဝေတဲ့ နောက် ၃၅ နှစ်အကြာ. ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီမှာ .. နောက်ဆုံးလူတစ်ဦး အဲဒီသီ
ချင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံခဲ့ပါတယ်တဲ့..။သူကတော့ အဲဒီသီချင်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့
Rezső Seress ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်.တဲ့..။ မြို့တော်Budapestမှာ ပြတင်းပေါက်က ခုန်ချခဲ့ပေမယ့် အသက်
မသေခဲ့ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဆေးရုံမှာ ၀ါယာကြိုးနဲ့ ကြိုးဆွဲချပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလူဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။
အံ့သြဖို့ကောင်းသလို လန့်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်..။ You Tube မှာ Gloomy Sunday လို့ရိုက်ပြီးရှာရင်
တွေ့ပါလိမ့်မယ်..။အပေါ်မှာ ချိတ်ပေးထားတာ..Wikipedia လင့်ခ်ပါ..။(လျှောက်ကြည့်ပြီးရင်တော့ဘာမှ
မလုပ်နဲ့ဦးနော်... ကျွန်တော်ကြည့်တာကတော့ ကျွန်တော်ကသမိုင်းကြောင်းကိုသိထားလို့လားတော့မသိ
သီချင်းက တစ်မျိုးပါပဲ.. ကြောက်စရာကြီး. ကျွန်တော်တောင် အဆုံးထိနားမထောင်ဘူး..။ နားထောင်ကြည့်
လိုက်ပေါ့ဗျာ...။ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်လန့်သွားတယ်.......။ (အမယ်လေး ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ်တပ်
တော်ပီ..အိမ်စာတွေအများကြီးပဲ.. စိတ်ကူးပေါက်ရာတွေလျှောက်ရေးထားတာ. အမြင်ကတ်တော့မှာပဲ.။
အိမ်စာလုပ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ..........။အော် မေ့တော့မလို့ .အဲဒီသီချင်းရဲ့စာသားပါ..။
and prayers that are said,
I know, but let them not weep,
Posted by မိုးသက် at 6:46 AM 8 comments Read more
အဖေရေးပေးတဲ့စာကိုတော့ ချွေတာစာ..လို့သာ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ချင်ပါတယ်.. ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို
တော့ အဖေ ရေးပေးတဲ့စာထဲမှာ..ချွေတာဖို့ အကြောင်းတွေ အများကြီးပါနေလို့ပါ..။အဖေ ပေးလိုက်တဲ့စာ
လေးကို..နံရံမှာကပ်ထားပါတယ်..။ အိပ်ယာထတိုင်းကြည့်ပါတယ်..။ အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်းလည်း ကြည့်ပါ
တယ်..။အိပ်ယာထတိုင်းကြည့်တာ က..အဖေမှာထားတာနဲ့ လွတ်မှာစိုးလို့..တစ်နေကုန်ဘာမှမလုပ်ခင်
ကြည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်..။ အိပ်ယာဝင်ခါနီးတစ်ခါကြည့်တာက.. ဒီနေ့တစ်နေကုန် အဖေမှာထားတဲ့ ထဲက
ဘာတစ်ခု ကျိုးသွားပြီလဲဆိုတာ ပြန်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်..။
အဖေ့စာကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြောစရာတစ်ခုရှိမယ်ထင်ပါတယ်.။ အပေါ်ဆုံးက သားသားဆိုတာ
ပါ..။ ဟင်..ဒီအသက်ဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေပြီ..သားသားတဲ့..။ဘာညာပြောမလားတော့မသိပါဘူး.။ ဒါပေ
မယ့် အဖေက ထူးထူးခြားခြားစာထဲမှာ ရေးရင် ငယ်ငယ်ကခေါ်တဲ့အတိုင်း သားသားလို့ရေးပါတယ်..။ အိမ်
မှာတော့..နာမည်ကိုခေါ်ပါတယ်.။ (စိတ်မကြည်ရင်တော့ .ဟေ့ကောင်.ပေါ့..။) အိမ်မှာက ညီမလေးနဲ့ကျွန်
တော် မောင်နှမ နှစ်ယောက်တည်းရှိတာပါ..။
အဖေ က ကျွန်တော့်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တော်တော်ကိုရည်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်..။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက
ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရင်..။အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ပြောပြတယ်..။ News Week, Times မဂ္ဂဇင်းတွေကို အိမ်
မှာဝယ်ထားပါတယ်...။ ဒါကတော့ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်..။ ဒါကတော့ ယာဆာအာရာဖတ်..စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ.။နိုင်ငံ
ခေါင်းဆောင်တွေကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သိနေခဲ့ပါတယ်..။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်ကျောင်းတောင်
မနေသေးဘူး...။ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကျောင်းမှာ မေမေနဲ့လိုက်သွားပြီးဆရာမတွေကိုပြောပြောပြတာ
တွေကိုမှတ်မိနေသေးတယ်..။ တစ်ခါကလည်း အင်္ဂလိပ်စာ အီဒီယံတစ်လုံးကို အဖေက ကျွန်တော်တို့ဆရာမ
ရေးပေးထားတာကို မှားတယ်ဆိုလို့..ကျွန်တော်ကျောင်းမှာ ဆရာမနဲ့ငြင်းခဲ့တာကိုမှတ်မိနေပါသေးတယ်...။
အဖေတို့ငယ်ငယ်က သိပ်ကိုချို့တဲ့ပါတယ်.. ။အဘိုးက သတင်းစာပို့ရပါတယ်...။ မေမြို့မှာ သတင်းစာ
ပို့တဲ့ ဦးစိန်တုတ်. ဆိုရင် မသိတဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲတဲ့..။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.အဘိုးအမြဲပြောခဲ့တဲ့
စကားတစ်ခွန်းရှိပါသတဲ့..။ ကိုယ့်ထက် မြင့်တဲ့သူတွေအများကြီးကိုမြင်နေပါစေ..။ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျတဲ့သူတွေ
ကိုရှာဖွေကြည့်ရှုရမယ် .. ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အဘိုးက ပြင်ဦးလွင်မှာ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်
အဖေတို့ မောင်နှမတွေက မွေးချင်း(၇)ယောက်ရှိပါတယ်..။ ယောက်ျားလေး(၄)ယောက်၊မိန်းက
လေး (၃) ယောက် ဖြစ်ပါတယ်.။ အဖေက အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်..။အဖေတို့ မောင်နှမတွေက ကျောင်းမှာ
အမြဲတမ်းပညာထူးချွန်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်..။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ အဖေက မေမြို့(ယခု-ပြင်ဦးလွင်ပေါ့ဗျာ)
တုန်း..က အမှတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့..ကျောင်းက ရန်ကုန်က (RIT)ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်..။အဖေနဲ့အတူတူ
ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တဲ့..လေးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် .အဖေ့သူငယ်ချင်းက..ဗထူး မှာဗိုလ်သင်တန်းလျှောက်ခဲ့
ပေမယ့်..အဖေကတော့..RIT ကိုသာ ဆက်တက်ခဲ့ပါတော့တယ်..။
ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ.. အဖေဒုတိယနှစ်အရောက်မှာ..အဘိုးဆုံးပါတယ်..။ မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးကို
ထွက်လိုက်ရပါတယ်.။အဖေ မေမြို့ကိုပြန်ရောက်တော့.. ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေက တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ကျောင်း
တစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်..။ အဖေကိုယ်တိုင်ကတော့ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းများစွာနဲ့
အမှတ်(၂)လေ့ကျင့်ရေးတပ်ထဲကို ၀င်သွားပါတော့တယ်..။ အချိန်ကတော့.၁၉၇၆-၇၇ ပြည်တွင်းစစ်မီး
အဖေက လေ့ကျင့်ရေးတပ်မှာ တပ်ခွဲမှူး.၊အိပ်ဆောင်မှူးအစရှိသဖြင့်လုပ်ရပါတယ်..။ဆယ်တန်းအောင်
ဆိုတာ အဲဒီအချိန်တုန်းက အင်မတန်ရှားပါးလွန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်.။ အဲဒီသင်တန်းက ဆင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ
အဖေဟာ.. ခလရ(၄၂) (လားရှိုး)မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်..။ ဒီလိုနဲ့ တပ်ရင်းမှာ ၄ နှစ်လောက်
ပါ..။အဲဒီမှာ သုံးလတစ်ခါ Practical လုပ်ဖို့ မန္တလေးကို ဆင်းရပါတယ်..။ အဲဒီအခါခရီးစရိတ်အတွက်..တပ်
ရင်းမှူးဆီကနေ အပိုဆောင်းချေးငွေခေါ်တဲ့ ငွေကိုချေးရပါသတဲ့..။အဲဒီချေးငွေကလည်း ယနေ့ခေတ်လို့တပ်
တယ်..။ဒီလို ပြန်ဆပ်တဲ့အခါ..အဲဒီငွေ.၂၀၀ ကျပ်ကို အဖေတို့မောင်နှမတွေ..အလုပ်လုပ်ပြီးအလီလီဆပ်ကြ
ရပါသတဲ့...။အဲဒီလို အခက်အခဲတွေကြားထဲကနေ အဖေ.၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်မှာ. သိပ္ပံဘွဲ့(ရူပဗေဒ)ကိုရရှိခဲ့ပါ
တယ်..။ အော်..အရေးကြီးတာတစ်ခု ပြောဖို့ကြံခဲ့ပါတယ်..။ အဲဒီလို စာသင်နေရင်းကာလမှပဲ.. မိုးကုတ်မြို့
ကရှမ်းမလေး တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးချစ်ကြိုက်မိခဲ့ပါတယ်..။ ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်တော့်အမေပါပဲ...။
အဖေနဲ့အမေဟာ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် အဖေက ဘွဲ့ရပြီးသည့်တိုင်အောင် အမေနဲ့လက်မထပ်
ဖြစ်ကြသေးပါဘူး..။ မိသားစု တာဝန်တွေမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ..။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ..အဖေဟာ
တပ်ကြပ်ကြီး/စာရေး အဆင့်နဲ့..စစ်တက္ကသိုလ် ၊ရူပဗေဒဌာန ကိုပြောင်းရွှေ့ရပါတယ်..။ အဲဒီမှာပဲ.. အဖေ
ရတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီး လစာ နဲ့ အဖေ့မောင်နှမ ၅ ဦး(၁ဦးကွယ်လွန်)ကို ၅ ဦးစလုံးဘွဲ့ရသည်အထိကျောင်းထား
ပေးခဲ့ပါတယ်..။(မှတ်ချက်..။ အဖေ့ မောင်နှမများ အားလုံးဝိဇ္ဇာဘွဲ့များဖြစ်သည်..။ အဖေတစ်ယောက်တည်း
သာသိပ္ပံဘွဲ့ဖြစ်သည်..။အိမ်တွင်ဘွဲ့ရပြီးသူ သုံးဦးစလုံး အဖေ၊ အမေ၊ ကျွန်တော်.. သုံးဦးစလုံးရူပဗေဒနှင့်
ဒီမှာထူးခြားတာ တစ်ခု ပြောရပါဦးမယ်.. အဖေနဲ့ အမေ ရည်းစားဘ၀က အမေ နေတဲ့ လမ်း(၈၀)ပေါ်
ကအဆောင်ကို အဖေက ညဘက် သူငယ်ချင်းများနဲ့ဂစ်တာ လာလာတီးကြောင်း. အဖေ့သူငယ်ချင်းများ
အိမ်ကို လာလည်တဲ့အခါတိုင်း ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်.။ ထူးခြားတာက ကျွန်တော် ဂစ်တာ စတီးပါပြီးဆိုတဲ့
အချိန်က စလို့ အဖေက ကျွန်တော့် ဂစ်တာကို တစ်ခါမှတောင် ကိုင်မကြည့်ခဲ့တာပါပဲ.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ
တော့ ကျွန်တော်မသိသလို့ .မေးလည်း မကြည့်ခဲ့တာပါ..။
အမေနဲ့ အဖေ လက်ထပ် မယ့်ဆဲဆဲမှာ.. အဖေတို့ မေမြို့အိမ်ကို ညနေစောင်းကြီး ရှမ်းလူမျိုး လူတစ်
ယောက် ရောက်လာပါတယ်..။ ပြီးတော့.. အဖေ့ကို “ ကိုဇော်ဝင်းတို့ အိမ်က ဒီအိမ်လား ” လို့ မေးပါတယ်
တဲ့..။အဖေက ဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောတဲ့အခါ..အိမ်ထဲကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီး..အဖေ့ကို တစ်ချက် အကဲ
ခတ်ကာ ဘာမှ မပြောပဲ ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်..။နောက်မှ အဖေ သိရတာက ထို လူက အမေ့အစ်ကို ဖြစ်ပြီး
အဖေ့အကြောင်းစုံစမ်းရာမှာ .မေမြို့က ကုလား လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့..ကြားရတဲ့အတွက် တိတ်တစ်ဆိတ် လာ
စုံစမ်းရင်းအိမ်ထဲမှာ. ဘုရားစင်ကိုတွေ့တော့ တန်း ပြန်သွားတာလို့ သိရပါတယ်တဲ့.. ။အမေ့ဘက်ကဆွေ
မျိုးတွေက .. ဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်..။အမေတို့ အစ်ကိုတွေကြားရတာက အဖေ့မှာ အိမ်ထောင်
နဲ့ ကလေး များပါရှိပြီးသားလို့ ကြားလို့လိုက်လာ ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့...။
သားကြီးဖြစ်တဲ့..ကျွန်တော့်ကို.၁၉၉၀ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့မှာမွေးတာဖြစ်ပါတယ်..။ ၁၉ရက်နေ့မှာ
မမွေးရကောင်းလား လို့ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အမေ့ကို မေးဖူးပါတယ်.။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တကွ..တိုင်းပြည်ခေါင်း
အဖေက သိပ်စည်းကမ်းကြီးပါတယ်.. ။ ပညာလည်းအင်မတန်တော်ပါတယ်..။ သူ့သူငယ်ချင်း(၄ဘာ
သာဂုဏ်ထူး ထွက်ပြီး တပ်မတော်ထဲ ဗိုလ်သင်တန်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ သူ) ယခုအချိန်မှာ အကြီးအကဲတစ်
ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ..သူကသာမာန်အခြားအဆင့်ဘ၀နဲ့.. နေနေရတဲ့အတွက်..ကျွန်တော့်ကို အရာ
ရှိ အင်မတန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အင်မတန်ပျော့ပါတယ်..။ ကျွန်တော့်အမေဘက်
က ၀မ်းကွဲအစ်ကိုတွေက လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားများဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုမျိုးမင်းသန့် ဆိုရင်. မြန်မာ့လက်
ရွေးစင်အသင်းမှာ ပါခဲ့ဖူးပါတယ်.(ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်...).။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က စာအုပ်က
လွဲရင် ဘာအားကစားမှ မက်မက်မောမောမရှိခဲ့ဖူးပါဘူး..။ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်း မရှိလေတော့ စာအုပ်တွေနဲ့
ချည်းကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်..။ဒီအတွက်ကြောင့် အဖေက ကျွန်တော် စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့မှာအင်မတန်ကြောက်
ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အဖေ့သွေး ပါတယ် ပြောရမှာပါ..။
ဆယ်တန်းပြီးခါစက ကျွန်တော် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်ကို တက်ချင်ပေမယ့် အမှတ်မမီ
လို့မတက်ခဲ့ရပါဘူး..။ကျွန်တော် အဲဒါနဲ့စစ်တက္ကသိုလ်ကို အဖေ့ အကြံပြုချက်နဲ့လျှောက်ပါတယ်.. ။ သိပ်ကံ
ကောင်းပါတယ်..။ စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ်(၁) ကနေ အပတ်စဉ်(၅၄) အထိ ကျွန်တော့်လိုကံကောင်းသူ
လက်ငါးချောင်းပြည့်မည်မထင်ပါ..။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. အဖေက ကျွန်တော့် မေဂျာမှာဓါတ်ခွဲခန်းမှူးဖြစ်
နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ တစ်ချို့သူငယ်ချင်းများ ဘိတ် ၊ မြစ်ကြီးနား..။ ဟိုးဘက်ကျိုင်းတုံ စသဖြင့် . မိဝေးဖဝေး
လာတက်နေရတဲ့အချိန်မှာ..ကျွန်တော်က မိဘ အရိပ်အောက်မှာပဲ စာသင်ခဲ့..၊ ကျောင်းပြီးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါ
တယ်..။ဒါပေမယ့် .. အဖေက ကျွန်တော့်ကို အခွင့်အရေးတစ်ရပ်လိုသဘောမထားစေခဲ့ပါ..။ Under
Training ကာလ ၄ လ လုံး အဖေ ကျွန်တော့်ဆီ တစ်ရက်မှလာမတွေ့ခဲ့ပါခင်ဗျား..။ “ ငါ့သား မင်းမပျော့နဲ့
မင်းတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး..အားလုံးအတူတူပဲ ..သူများလုပ်ရင် မင်းလည်းလုပ်နိုင်ရမယ်..” ဆိုတဲ့
စကားနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ကိုအားပေးခဲ့ပါတယ်..။ တစ်ပတ်တစ်ခါ Outpass ရတိုင်း အိမ်ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်
အရေး တစ်ခု ကိုတော့ကျွန်တော် အပြည့်အ၀ ရခဲ့ပါတယ်.။စစ်တက္ကသိုလ်မှာ ထုံးစံတစ်ခုရှိပါတယ်..။ အဲဒါ
က ဆန်ရင်းကိုနာနာဖွပ်တဲ့ ထုံးစံပါ..။ စစ်သား သားသမီး..။အရာရှိကြီးတွေရဲ့သားသမီး..။စတဲ့သူတွေကို
နာနာဖွပ်တဲ့ထုံးစံပါ..။ အပြင်မှာ ဘယ်လိုပဲနေခဲ့နေခဲ့.. မာန်မာနတွေကိုချိုးပစ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်...။
အပြစ်ပေးတဲ့အခါတိုင်းမှာ.အရာရှိကြီးများရဲ့သားသမီး တွေ၊ စစ်သားသားသမီးတွေကို..အရင်ဆုံးစံနမူနာပြ
အနေနဲ့အပြစ်ပေးတတ်ပါတယ်..။ကျွန်တော် ကတော့ သုံးနှစ်လုံးလုံးအထူးစပယ်ရှယ်အနေနဲ့ နာနာနှက်ခံ
အဖေရော အမေရောဟာ အင်မတန်ရိုးသားတတ်ကြသူတွေပါ..။အလွန်အမင်းအားနာတတ်တဲ့အ
တွက်..စိတ်ပညာပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်..အပြင်စွဲ များတဲ့သူတွေလို့ပြောနိုင်ပါတယ်.။ အနစ်နာခံပြီးသူတစ်
ပါးကို ကူညီတတ်ခြင်းဖြင့်.မိမိကို ထိခိုက်မှန်းမသိထိခိုက်ပါတယ်.။အဖေ ကကျွန်တော်ကိုငယ်ငယ်လေးက
တည်းက သူ့စိတ်ကြိုက်ပုံစံသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ သိလာပါတယ်.။ အံ့
သြဖို့ကောင်းတာက စစ်တက္ကသိုလ်မှာသင်ပေးတဲ့ နေထိုင်ကျင့်ကြံမှုစည်းကမ်းတွေဟာ.ကျွန်တော်အိမ်မှာ
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေဖြစ်နေတာပါပဲ..။ ပြင်ဦးလွင်လို မကြီးမသေးမြို့လေးမှာမွေးပေမယ့်..ကျွန်တော့်အိမ်မှာ
နေထိုင်ပုံဟာ. မြို့ကြီးပြကြီးကကလေးတွေလို နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိလာရပါတယ်.။ ၄ တန်းနှစ်
ကစပြီး အိမ်မှာဇွန်းခက်ရင်းနဲ့ စားရတယ်..။ ဇွန်းကို ခဲတံလိုကိုင်.. ၊ခက်ရင်းကို ဓါးလိုကိုင်ဆိုတာကို စစ်
တက္ကသိုလ် မရောက်ခင်ကတည်းက အဖေသင်ပေးထားခဲ့တယ်..။ နက်ကတိုင်စည်းနည်း ကျွန်တော်သိထား
ခဲ့တယ်.။ စစ်ချီသီချင်းတွေ ကျွန်တော်ကလေးဘ၀ကတည်းက အလွတ်ရနေခဲ့တယ်..။၈ တန်းနှစ်က စပြီး
လုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုသိအောင်လို့ လို့ အ ဖေက ပြောပါတယ်.။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်ခုချိန်ထိ
ဒိုင်ယာရီမပျက်ရေးနေခဲ့တာပါပဲ..။ အဖေက ကျွန်တော်ကိုစာသိပ်ရေးစေချင်ပါတယ်.။ ဗိုလ်မှူးကြီးသောင်း
ဝေဦးတို့..၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတင်သန်းဦး တို့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြပါတယ်.။ဆရာကြီး ထီလာစစ်သူအကြောင်း
လည်းပါတာပေါ့..။ ကျွန်တော် စရေးဖူးတဲ့ကဗျာလေးကို အဖေခုထိ သိမ်းထားသေးတယ်.။၉ တန်းတုန်းက
ရေးတဲ့ကဗျာလေးပါ..။(မဂ္ဂဇင်းမှာ စာမူစပါတုန်းက . ပထမဆုံးရတဲ့ စာမူခကို အဖေ့ကိုကန်တော့တော့အဖေ
မျက်ရည်တွေဝဲနေတာ တွေ့ပါတယ်..။ မုတ်သုံ(ပြင်ဦးလွင်) ကလောင်အမည်နဲ့ရေးတုန်းကပေါ့..)
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အဖေအမှတ်တရလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ထဲကမှ အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုက ကျွန်တော် ၄ နှစ်
သားတုန်းက. အဖေက မေမြို့ရေသရောက်ကုန်းမှာရှိတဲ့ ပျားမွေးမြူရေးစခန်းကို သွားရပါတယ်.။ ညနေမိုး
ချုပ်မှ ပြန်ပြန်လာတတ်ပါတယ်.။ အဲဒီမှာ အမေက ကျွန်တော့်ကိုမှာပါတယ်.။ သားကိုချစ်ရင် အဖေဆေးလိပ်
မသောက်နဲ့ လို့ ပြော ခိုင်းပါတယ်.။ ပြောရင် စားချင်တာ ၀ယ်ကျွေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်..။ ကျွန်တော်
ကလေးကတည်း က အစားအသောက်ကို သိပ်မက်မက်မောမော မရှိလှပါ..။ဒါပေမယ့် အမေပြောခိုင်းတော့
လည်းပြောရပါတယ်..။အဖေက မိကျောင်းစက်ဘီးလေးကို မပြီး အိမ်ထဲဝင်လာတော့..အဖေ့ခြေထောက်ကို
ပြေးဖက်ပြီး.လေးနှစ်သား ကျွန်တော်က . အဖေသားကိုချစ်ရင်ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့တော့ လို့ တစ်ခွန်းပြော
လိုက်ပါတယ်.။ အဲဒီအခါ အဖေက ကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပါတယ်..။ပြီးတော့ ပွေ့ချီလိုက်ပြီး..
“ အေး ” လို့ တစ်ခွန်းပြောလိုက်ပါတယ်.။ အဲဒီ“ အေး ”ရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အဖေ လုံးဝဆေးလိပ်မသောက်
ကျွန်တော် ကျောင်းဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ. အဖေကျွန်တော့်ကို အဓိက ထားမှာတာက.. အောက်
ခြေမလွတ်ဖို့..၊ အရက်သေစာမသောက်စားဖို့.နဲ့ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ကို၊ မိမိ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဂုဏ်သိက္ခာ
ကျအောင်မလုပ်ဖို့ကို အမြဲမှာလေ့ရှိပါတယ်.။ ကျွန်တော် သင်္ကြန်ရောက်ခါနီး တပ်ကိုပြန်တော့..ယူနီဖောင်း
ဖြင့်ရထားမစီးလို့..အဖေက ဘာလို့ မစီးတာလဲ မေးတော့.. ကျွန်တော်က .. အနေအထိုင်မှားသွားရင်.ကျွန်
တော်ရော.. Officer Corp ကြီးတစ်ခုလုံးရော၊ စစ်သားတွေအားလုံးပါ သိက္ခာကျမည်စိုးလို့  လို့ ဖြေလိုက်
တော့ အဖေက ဒါမှ ငါ့သား လို့ ပခုံးကိုဖက်ပြီး ဆိုဖူးပါတယ်.။
ကျွန်တော့် မှာအဖေ့ဆီက ပါလာတဲ့ဗီဇ တစ်ခုရှိပါတယ်..။ အဲဒါက လိမ်ညာတာကို အင်မတန်မုန်းတာ
ပါ.။ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မရိုးမသားမလုပ်သလို မိမိကိုမရိုးမသားလုပ်လျှင်လည်း အဲဒီလူကို သည်းမခံပါဘူး.။
သည်းမခံဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ ရိုင်းပြစွာ..ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ.။လုံးဝ မဆက်ဆံတော့တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်
ပါတယ်..။ပြီးတော့ အဖေက လူတိုင်းအပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်လေးတစ်ခုကို ကျွန်တော့်ကိုလက်
ဆင့်ကမ်းပေးထားပါတယ်..။ဟိုးအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကတော့ ..ကျွန်တော် လေယာဉ်ပေါ်ကို
မတက်ခင်.. အဖေက ပြာယီးပြာယာနဲ့ရေးပေးခဲ့တဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ်....။ အဖေ့စကားကို အားလုံးမဟုတ်
ရင်တောင် အားလုံးနီးပါးတော့နားထောင်နေပါတယ်..အဖေ.. လို့.. ။ ဒါပေမယ့် အိပ်ရေးပျက်နေတာကလွဲ
ရင်ကျန်တာ အားလုံး တော့နားထောင်ပါတယ်..။
အဖေ့ကို ဒီနေရာကနေ စကားလေးတစ်ခွန်းပြောချင်ပါတယ်...။အဖေ့စကားတွေကိုအားလုံးနားထောင်
ချင်ပါတယ်.အဖေ .။ ဒါပေမယ့် .အဖေ့သားက ကမ္ဘာ့လူဦးရေ..သန်း(၆၀၀၀)ကျော်ထဲမှာ မထင်မရှားမွေး
လာပြီး မထင်မရှားသေဆုံးသွားရမှာကို မလိုလားဘူးအဖေ.....ခွန်အားရှိသလောက်.. အစွမ်းရှိသလောက်
တော့ ပျံသန်းပါရစေ အဖေ..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ခုချိန်ထိတော့.. လိမ္မာနေဆဲပါပဲအဖေရယ်.လို့ မြန်မာ
ပြည်က အဖေ့ဆီ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်...။
Posted by မိုးသက် at 1:00 PM 8 comments Read more
ငါစာရေးလိုက်တယ် ၊ ရေးရမှာပျင်းလို့ဟာ.. နဲနဲပဲရေးလိုက်တယ်..။နင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံရတယ်.။
နင်ကလည်းဟာ..။ အသားအရောင်နဲ့ဟပ်နေတာပဲ..။အင်္ကျီအရောင်ကအနီရောင်ဆိုတော့..။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်
ကျီးကန်းက ငရုတ်သီးကိုက်ထားသလိုပဲ..။ဟီ ဟိ..ဒါနဲ့နင်တောင်ကြီးလာမယ်ဆို..။လာမယ့်ရက်ကြိုပြောလေ..ငါ
ရှောင်နေမလို့..ဟဲဟဲ အလကားစတာပါ..နင်လာရင်မုန့်ဝယ်ခဲ့..။ဒါပဲနော် ညနက်နေပြီ.. မနက်စောစောဂျူတီဝင်ရ
မစားရ၀ခမန်းချစ်သ၀ဏ်လွှာကိုကြည့်၍ကျွန်တော်သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိသည်…။ ကြည့် ဒါလား
ချစ်သူကိုရေးတဲ့စာ…။ ချစ် ဆိုလို့ မီးခြစ်ပင်မပါ..။
သူနဲ့ပတ်သတ်၍ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနေသောအကြောင်းအရာများစွာရှိပါသည်..။ ထိုအ
ကြောင်းအရာများမှာ ဘာမှပင်မထူးခြားသော်လည်း လွန်စွာ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလှသည်ဟု ဇွတ်အတင်း
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မိန်းကလေးများနှင့်ကြုံပေါင်းများပါပြီ(တစ်မျိုးမထင်ပါနှင့် ယခုထိ ရေမရောသော
“အော်” စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းပါ)ကြုံဖူးသမျှ မိန်းကလေးထဲတွင် သူမလောက် ဂဂျီဂဂျောင်၊ ဂျစ်တီးဂျစ်ကန်၊ ကိုးလိုး
ကန့်လန့်၊ ပေါက်တိပေါက်ရှာ၊ ပေတိပေစောင်း၊ ဂဂျိုးဂဂျောင်၊ ကတ်သီးကတ်သတ် နိုင်သူကိုမတွေ့ဖူးပါ..။
“ဟင် သူလုပ်သမျှခံနေရအောင် မင်းက ပိန်းတာကိုး” ဟုဆိုလျှင်ကား မှားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်ကား ခေ
သူမဟုတ်ပါ..။ဂျူနီယာဗိုလ်လောင်းဘ၀က နယ်သား စီနီယာကစနောက်သည့်သဘောဖြင့် အပြစ်ပေးနေရင်း
“ရည်းစားဓါတ်ပုံပြနိုင်တဲ့သူ တန်းထ” ဟုဆိုလျှင်ထိပ်ဆုံး ကရင်ကော့ပြီးထနိုင်သူ ဖြစ်ပါသည်..။(ကျန်သည့်နယ်သား
များကိုမစွံဟုမဆိုလိုပါ.။ကျန်သူများမှာလည်းတစ်မျိုးစီ “ဖြောင့်”သူများဖြစ်ကြသည်.။)ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်တော်
လည်းအချစ်ရေးတွင်“အူရိုင်း”မဟုတ်ပါ။ အထိုက်အလျောက်တော့“၀ါ”နဲ့“သမ္ဘာ”နဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မိန်းမမာယာ၊သဲကိုး
ဖြာပေါ်တွင် ဖျာခင်း၍အိပ်ပစ်မည်ဟု ကြုံးဝါးခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါသည်..။
ကျွန်တော်တို့ခြေလျင်တပ်စုမှူးသင်တန်း ဆင်းပြီး၍တပ်ပြန်ရန် တောင်ကြီးရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်..။
“တပ်ပြန်တာနဲ့တောင်ကြီးဘာဆိုင်လို့လဲ” ဟုမေးစရာရှိပါသည်။ နေပြည်တော်-တောင်ကြီးပြေးဆွဲသောကားများ
သည် တောင်ကြီးမှထွက်သောကြောင့် ၊ ဗထူးမှတောင်ကြီး၊ တောင်ကြီးမှ နေပြည်တော်သို့ကားစီးရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ယခုရောက်နေတဲ့နေရာက တောင်ကြီးမြို့အ၀င်နား ရှမ်းကျောင်းအနီးက မြို့ပတ်ကားများရပ်
မနေ့ညက ဗထူးမှာနှုတ်ဆက်ပွဲအတွက်ဂစ်တာတီးရင်းအိပ်ရေးပျက်သွားသောကြောင့်ခေါင်းက မူးချင်နေ
“အေး..မိုဟွမ် ငါအခုတောင်ကြီးကိုရောက်နေပြီ..ဟိုဟာ..အင်း ရှမ်းကျောင်းနားက ဇွဲ ကားဂိတ်မှာ..အဲဒါနင်လာခဲ့ပါ
“ဟာ..ငါမအားဘူး.. နောက်နာရီဝက်လောက်မှအားမှာ အခုအိမ်မှာ ညီမလေးတစ်ယောက်ထဲရှိတယ်..”
ညီမလေးပါခေါ်ခဲ့ပါလား ဟုပြောမည်ကြံပြီးမှ ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရသည်။ ညီမလေးက သူနှင့်အသက်သိပ်
သူကညီအစ်မသုံးယောက်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်မှာ ဆရာသောင်းဝေဦး၏ စာထဲကလိုပင်
“ထုနှင့်အရန်အင်အားတောင့်တင်းမှုကြောင့်ထိုးစစ်အပြုအမူအတွက် သင့်လျော်သည်” ဟုစစ်ရေးသုံးသပ်ရမည်
ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးအလုပ်က သူများကိုစောင့်ရသည့်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ဆိုင်စွာပင် ..သရဲမ(ခ)
မိုဟွမ်၏ ၀ါသနာအပါဆုံးအလုပ်မှာလည်း..အခြားသူကိုစောင့်ခိုင်း၍ စိမ်ပြေနပြေအလုပ်လုပ်တတ်ခြင်းဖြစ်နေ
သည်။ သူနာရီဝက် ဟုပြောလိုက်သည်နှင့် ကျွန်တော်က တစ်နာရီခွဲလောက်တော့အနည်းဆုံးတွက်ပြီးသားဖြစ်ပါ
လက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်သည်။ ၁၀၃၀ ဆိုတော့ နေ့လည်စာစားချိန်နီးပါပြီ..။သေချာတာတစ်ခုတော့
ထမင်းမစားပဲ စောင့်လျှင် ကျွန်တော်သေချာပေါက်ငတ်ပါတော့မည်..။
ဒီလိုဆိုတော့တစ်ခုခုစားကြမည်ပြုသည်..။သိပ်မခဲယဉ်းပါ..ကားဂိတ်က အန်တီကြီး၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အနီး
ကစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုသွားစားဖြစ်ကြသည်။ ထိုအထိဘာမှ ပြဿနာမရှိ..။ သို့သော် ပြဿနာက အ
ကားဂိတ်ကိုပြန်ရောက်တော့ အန်တီကြီးက ဆီးပြောသည်..။
“သားရေ ရှမ်းမချောချောလေးတစ်ယောက်လာသွားတယ်.. အချိန်မရလို့လားမသိဘူး.ချက်ချင်းပြန်သွား
စာဖတ်သူတို့ကိုအရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ကြိုပြောရန်မေ့သွားပါသည်။ အကြောင်းမှာထိုအချိန်ထိ
သရဲမ နှင့် ကျွန်တော်မှာ “နင်” “ငါ” “သယ်ရင်း” စသည်ဖြင့် ခင်မင်ရင်းနှီးနေလင့်ကစား တစ်ယောက်နှင့်တစ်
ယောက် ကိုဓါတ်ပုံထဲမှလွဲ၍မြင်ဖူးခြင်းမရှိကြပါ..။ သူနှင့်ခင်မင်နေသည်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ အောင်ဟိန်း
၏မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်ဒုတိယနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပြီး ယခုမှတိုက်ဆိုင်စွာဆုံတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။(သကောင့်သား
ကျွန်တော်၏ရုပ်ရည်မှာ စာဖတ်သူတို့သိကြသည့်အတိုင်း ‘Prison Break ‘ဇာတ်ကားမှ Micheal Scofield
ကဲ့သို့ ခန့်ညားယောက်ျားပီသပြီးဖြစ်သော်လည်း ..Photoshop နည်းပညာတိုးတက်လှသောခေတ်ထဲတွင် သရဲမ
၏ဓါတ်ပုံကို သံသယရှိဖူးပါသည်။ သို့ရာတွင်ကားဂိတ်မှအန်တီကြီး၏ပြောစကားအရမူ သူမချောမောလှပမည်ဆို
ဘေးကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကိုခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်.။ အောင်အောင့်ကို ၀တ္ထုအစတွင် မပါဘဲခုမှ မိုးကျရွှေ
သည်..။သူနှင့်ကျွန်တော် စကားပြောခြင်း၊ရယ်စရာပြောခြင်းတို့ကို ကျွန်တော်ထည့်ရေးလျှင်လည်း စာဖတ်သူငြီး
ငွေ့သွားနိုင်ပါသည်။ စိတ်လည်းဝင်စားမည်မဟုတ်ပါ..။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသင်း ၏အကြောင်းများဖြင့် စာ
ဒါဖြင့်ရင် အောင်အောင်က မနက်ခင်းကတည်းကစကားတစ်လုံးမှမပြောဘဲ အသေကောင်လိုငြိမ်နေသ
လားဟုမေးစရာရှိပါသည်။ ဒီလိုမဟုတ်ပါ..။သူ၏မုန်းစရာကောင်းလှသောဝသီအတိုင်း ပြင်းထန်စွာရှုံ့ချခြင်း၊ ကိုးလိုး
ကန့်လန့်လုပ်ခြင်းနှင့် ရံဖန်ရံခါကျွန်တော့်ကိုဂျီကျခြင်းတို့ကို မနက်ကတည်းကလုပ်လာသူဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်
သင်း ၏အရည်မရ အဖတ်မရများကို ကျွန်တော်က အမြင်ကတ်စွာဖြင့်ထည့်မရေးဘဲ “ဆင်ဆာ”ဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါ
“ အဲဒါငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲ..လာပြန်ပြီ ..မင်းကအမှတ်မရှိတဲ့ကောင်ပဲ..”
ဆိုလိုသည်မှာအရမ်းကိုနုနေသည်..(ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ..ကိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်ဖို့ အဲလို ဆွဲတွေးလို့လဲရပါတယ်)
“ သြော် သူကားဂိတ်ကိုသွားတယ်ရှင့် ..”
“ အာ..မင်းရောငါရောခုမှ ရောက်ဖူးတဲ့ဟာ.. မေးစမ်းပြီး သွားကြတာပေါ့..”
ကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတောင်မေး မြောက်မေးနှင့်သွားကြသည်..။သိပ်တော့မဝေးပါ..။Cyber Café တွေက
ပေါပါသည်။ သို့ရာတွင်လူပြည့်နေသည်ကများသည်။ ထပ်သွားပေါ့..။
တောင်ကြီးမြို့က တော်တော်လှသည်..။တောင်ကြီးသူ၊တောင်ကြီးသားတွေကလည်း ဣနြေ္ဒရရ၊ လူကြီးလူ
ကောင်းဆန်ဆန်ပုံစံတွေဖြစ်သည်..။ ထိုပုံစံကို ကျွန်တော်သဘောကျသည်။
အမှတ်(၇) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနားရောက်တော့ “ရတီမြန်မာ”ဆိုသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့
သည်..။ထိုဆိုင်လေးမှာတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် ကျွန်တော်တို့နေရာရသည်။
ဆိုင်မှာကျွန်တော် Gtalk စဖွင့်တော့သူမ အွန်လိုင်းမှာမရှိပါ..။ကျွန်တော်ဟိုဟိုဒီဒီ webpageတွေလှန်လှော
မရှေးမနှောင်းပင် သရဲမလည်း အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာပါသည်..။
ကျွန်တော်ရှင်းပါရစေ..။အထက်ပါ “အေပြော”မှာ သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တိုင်း သူအမြဲပြောနေကျ
စကားဖြစ်ပါသည်။ (“အေးပြော”မဟုတ်ပါ) ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းတော့မသိပါ..။သို့သော်..အထက်ပါ “အေပြော”မှာ
ကျွန်တော်အမြဲအမှတ်ရနေသော သူသင်္ကေတ ဖြစ်ပါသည်။
“ငါ နင့်ဆီလာရင်..၅မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာမို့ နင့်ကိုရစ်နေတာ..ငါဘာရောင်ဝတ်လာရမလဲ..”
ဤနေရာတွင် ကျွန်တော် မြေပြင်အခြေအနေကိုမြင်သာအောင်ပြောပြပါမည်..။ ကျွန်တော်ထိုင်သည့်နေရာ
ကဆိုင်အပေါက်ဝနှင့် မလှမ်းမကမ်း ..။အပေါက်ဝကရေလျှင် ငါးလုံးမြောက်နေရာမှာ..။ကျွန်တော်ညာဘက်ကပ်
လျက်ကပန်းရောင်အင်္ကျီနှင့်ကောင်မလေးတစ်ယောက်..။သူ့ဟိုဘက်က အဖြူရောင်ဝတ်ထားသောကောင်မလေး
နှင့်ဘာတွေပြောမှန်းမသိ..။တစ်ယောက်နားတစ်ယောက်ကပ်၍ တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုးလုပ်နေသည်…။ကျွန်တော့်
သူ့စကားအဆုံးမှာ ကျွန်တော် အတွေးနည်းနည်းဝင်သွားသည်..။အကယ်၍သူသာဆိုင်ထဲမှာရှိနေခဲ့မည်ဆို
လျှင်ကျွန်တော့် အူကြောင်ကြောင်အဖြစ်ကိုကြည့်၍ ရယ်နေလိမ့်မည်..။
ကျွန်တော့်ညာဘက်တစ်ယောက်ကျော်က အဖြူရောင်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်..။သူမက သိပ်ဂဏှာ
မငြိမ် ဟုထင်သည်..။ဆံပင်ကို မသပ်မရပ်ကပိုကရိုလေးကတစ်မျိုးကြည့်ကောင်းသည်..။လက်မှာက ချည်မန်းကွင်း
ဒီနေရာတွင်တစ်ခုပြောလိုပါသည်။ကျွန်တော့်ကို သူမပေးထားသောဓါတ်ပုံမှာ တစ်လက်မပတ်လည်မျှရှိ၍
Sticker ပုံဖြစ်သောကြောင့် သဲသဲကွဲကွဲမရှိပါ..။သူမကတော့ ကျွန်တော့်ကိုမှတ်မိပါလိမ့်မည်..။ ကျွန်တော်သူ့ကိုပေး
ထားသောပုံမှာ ဖိုင်နယ်ရီးယားဘ၀က “သုံးနှစ်သုံးမိုး”အခွေထုတ်မယ်ကြံစဉ်က CD Stickerထုတ်ရန်ရိုက်ထားသော
ပုံဖြစ်ပါသည်။(ပုံမှာ ကော်ရစ်ဒါမှနေ၍အဝေးသို့ ဆွေးလှသောမျက်နှာဖြင့်မျှော်ငေးနေသောပုံဖြစ်၍ ထိုပုံကိုအပေါင်း
အသင်းများက “လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်နေသောအရူးပုံ” ဟုကွယ်ရာတွင်ခေါ်ဝေါ်ကြကြောင်းမသိုးမသန့်သတင်း
“ဒါဆိုနင်လို့ထင်တဲ့တစ်ယောက်ကို ငါလက်ဆွဲပြီး အပြင်ခေါ်သွားရမလား..”
“ လူမှားလို့ပါးရိုက်ခံနေရဦးမယ်နော် ..”
ကျွန်တော်မသေချာ၍ ဂဏှာမငြိမ်တဲ့ကောင်မလေးကို နောက်တစ်ခါပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်..။ပီကေ
တွေ တစ်စွတ်စွတ် စားရင်း ပြုံးစေ့စေ့လုပ်နေသည်..။
“ အင်းနင်နဲ့ တူတဲ့သူရှိတယ်.. သူကတော့ဟန်ဆောင်ထားတယ်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် သူက will power နိမ့်
“ဆိုင်အပြင်ထွက်ခဲ့ စောင့်နေမယ် ..” တဲ့..။
ကျွန်တော့်ကို ဆိုင်ရှေ့ ကချယ်ရီပင်ကြီးအောက်မှာသူမရပ်စောင့်နေသည်..။ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်၏ “ချယ်ရီ
ပင်အောက် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်တွေ့တဲ့ထိ..”ကိုသတိရသည်..။သူမက ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်အဖြူရောင် မှန်ဖုံး
အမည်းရောင်လေးကိုမေးသိုင်းကြိုးတပ်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုပြုံးစေ့စေ့ဖြင့် ကြည့်ရင်းဆိုသည်..။
“နောက်က သူငယ်ချင်းကို နင်သိမှာစိုးလို့ ငါ့နာမည်မခေါ်ပါနဲ့ဆိုတာ ခေါ်ဖြစ်အောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်.”
သူမအထင်က ကျွန်တော်သူ့မနာမည်ခေါ်သံကြား၍ သူမကိုသိသွားသည်ဟုထင်နေပုံရသည်..။
သူမပုံစံက ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှမိန်းကလေးတွေနှင့်တော်တော်ကွာသည်..။ယုံကြည်မှုရှိသော ၊ဖော်ရွေ
သောပုံစံနှင့် တိုင်းရင်းသူပီပီ ရိုးသားပွင့်လင်းပုံများကကျွန်တော်သဘောကျသောပုံစံအတိုင်းပါပဲ..။(တစ်ခါတစ်ခါနွား
ကြိုက်တာလည်းရှမ်းချောဖြစ်တတ်ပါတယ်..) ဘာပဲပြောပြော..သူကတော့ ကျွန်တော့် စာမေးပွဲမှာ အောင်ရုံမက
သူမကဆက်၍ သူမသူငယ်ချင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပါ..။တကယ်
တော့သူပြောကတည်းက ဦးနှောက်က မာနကြီးစွာနေရာမပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်..။နားထဲမ၀င်ခြင်းဟုဆိုရမည်..။
ဦးနှောက်ထဲတွင်စိုးမိုးနေပြီဆိုလျှင် မည်သည့်အရာမျှ ခေါင်းထဲမ၀င်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်..။ဥပမာ..အာရုံကကိုယ်အ
လွန်အမင်းနှစ်သက်သောသီချင်းသံကိုနားစွင့်နေချိန် စာအုပ်ဖတ်ရာ၌ “ ရှာရာဗိုပါ ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ပြိုင်ပွဲနှင့်လွဲ”
ဆိုသည့်စာတန်းမျိုးကိုပင် လေးငါးခြောက်ခါဖတ်၍အဓိပ္ပါယ်မပေါက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူ့အပေါ်
တွင် ကျွန်တော့်အာရုံ အပြည့်အ၀ရှိချိန်တွင် အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရေရေရာရာ မသိပါဘဲခေါင်းညိတ်မိ
မသိ..။ကျွန်တော်သတိရတော့မရှိတော့..။ကျွန်တော် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေ၍ သတိမထားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါ
ကျွန်တော်သည်.မိန်းကလေးများနှင့် ဆိုင်ကယ်သုံးယောက်စီးခြင်းကို တစ်ချိန်တစ်ခါက ပြင်းထန်စွာဝေဖန်
ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါသည်..။သို့ရာတွင်ယခုတော့ ကျွန်တော်ပင် မျက်နှာပူစွာပင် သုံးယောက်စီးရမည့်ကိန်းပေါက်နေသည်။
ဒုက္ခရောက်ပြီဟုတွေးမိပြီးဟိုဟိုဒီဒီကြည့်နေဆဲမှာပင် ကယ်တင်ရှင် တစ်ဦးက( မြန်မာကားများထဲမှ ဇာတ်
စာဖတ်သူကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်..။အဆိုပါစိုးမင်းသူမှာတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိဆက်သွယ်ရေးတပ် မှ သူငယ်
ချင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်နှင့်အတူ ဗထူးတွင် အတူသွား၊အတူစား၊အတူအသည်းကွဲ ခဲ့သည့်ပါတနာများထဲမှတစ်
ယောက်ဖြစ်ပါသည်..။သူရောက်လာမှအားလုံးကွက်တိဖြစ်သွားသည်..။မိုဟွမ်နှင့်သူ့သူငယ်ချင်းကတစ်စီး…..၊ကျွန်တော်နှင့်စိုးမင်းသူက တစ်စီး အဆင်ပြေသွားသည်..။ပြီးတော့သူ့သူငယ်ချင်းကို သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းကအ
ဆောင်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးပါသည်။ သင်တန်းကျောင်းနားမှာ ဆိုင်ကယ်ခဏရပ်တော့ သူမက ကျွန်တော်မမေးပါဘဲ
“ ငါ ဟိုတစ်နေ့က ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်လူနာကိုကိုင်ရင်းနဲ့ ငါ့လက်ထဲမှာပဲဆုံးသွားတာလေ..အဲဒါလိပ်ပြာ
ကျွန်တော့်စကားဆုံးတော့ သူပြန်သွားပါသည်..။ ကျွန်တော့်ကိုစိုးမင်းသူကားဂိတ်ပြန်ပို့ပေးတော့ လေးနာရီ
ငါးနာရီမတ်တင်းလောက် တွင်မိုဟွမ်ပြန်ရောက်လာသည်..။ဆိုင်ကယ်တွေများပြားလှသောလည်း ကျွန်
တော့်မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင်စွဲထင်နေသောသူ့ပုံစံနှင့် အဖြူရောင်ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် နေကာမှန်အမည်းလေးကိုမှတ်မိ
နေပါသည်..။သူက ကားဂိတ်ကိုကျော်သွားပြီးမှ ကျွန်တော်ကလက်ပြလိုက်၍ ပြန်လှည့်လာသည်..။
သည် ..။သို့သော် လက်တွေ့တွင် ဖြစ်မလာပါ..။သူမကပင် မုန့်နှင့်အချိုရည်ဗူးတွေယူလာပါသေးသည်..။မှတ်မှတ်
ရရ အေးသာယာကထုတ်သောကိတ်ခြောက်ထုပ်(နာမည်မမှတ်မိ)နှင့် ivy အချိုရည်ဗူးဖြစ်သည်..။ကျွန်တော်ကသူ
ကျွန်တော်တောင်ကြီးက ပြန်လာတော့တစ်လမ်းလုံးအတွေးများဖြင့် ..။
လှပပြီးဣနြေ္ဒရတဲ့မြို့…၊ရတီဆိုင်လေး..၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း..၊ဇွဲကားဂိတ်..၊ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်အဖြူရောင်
နေကာမှန်အမည်းလေး…အားလုံးက ကျွန်တော့်ရင်ထဲက ကဗျာတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ..။
ကျွန်တော်နှစ်ခြိုက်သဘောကျသောတောင်ကြီးမြို့နှင့် ချစ်စရာကောင်းသော သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ဦးထံ
သူမကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည့် ၅-၆-၂၀၁၀ရက်နေ့နှင့် သူမကိုချစ်ရေးဆိုခဲ့သည့် ၅-၇-၂၀၁၀ ကိုမူ သေချာစွာမှတ်သား
ထားပါသည်..။သူမနဲ့တွေ့စဉ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုပုံစံလဲ ဆိုတာမပြောတတ်ပါ..။သင်တန်းဆင်းလာခါစဖြစ်
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်သည့်အတွက် ဒီစာကိုရေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေးနေတဲ့အချိန်က တိုက်စည်းသင်တန်းကျောင်းမှာ ရေချိုးတိုင်း ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေကိုမြင်နေရတဲ့ အချိန်
မှတ်ချက်။ ။ဒီအဖြစ်အပျက်များကို ဖတ်ရှုသူများအနေဖြင့် ပြင်ပတွင်အင်တာဗျူးခြင်းကို ကျွန်တော်မေမြို့မိုး မှ
စကားမစပ်..။ အစ်မဂျက်. က တောင်ကြီးကိုသတိရတယ်ဆိုလို့.. တောင်ကြီးကဇာတ်လမ်းလေးကိုရေးဖြစ်တာပါ...။
တောင်ကြီးမြို့ကိုလည်း တကယ်သဘောကျပါတယ်..။ တောင်ကြီးသူလေးတွေလည်းလှတယ်.. ။ တို့ အစ်မဂျက်လိုပဲ..း)..။
Posted by မိုးသက် at 9:56 AM 10 comments Read more
မနေ့က လိုက်ပို့တာ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ.. ။အော်.. ပွဲကောက်ရေတံခွန်ရောက်သွားပြီထင်ရဲ့..။
အင်း.. ဟုတ်တယ်..။ပွဲကောက်ရေတံခွန်ကို ပြင်ဦးလွင်ကို ပြန်ရောက်မှ ၂ ခေါက်တိတိရောက်ပါသေးတယ်။
ဒီကိုမလာခင် အချိန်အထိပေါ့..။ ပွဲကောက်ကနေ ဟိုးဘက်ကို ဆက်သွားရင်.. ရုပ်ရှင်တွေ အင်မတန်ရိုက်တဲ့
တော အုပ်လေးထဲရောက်သွားမယ်... ။ တကယ်တမ်းတောအုပ်ဆိုပေမယ့်.. လျှိုကြီးဖြစ်နေတာပါ..။တတိယ
ရေတံခွန်လို့ခေါ်တဲ့.. ရေပြာပြာရေတံခွန် ဘက်.. (လူတော်တော်ပြတ်) ကိုပြောတာပါ..။
အဲဒီက နေ ဟိုးဘက်ကိုဆက်သွားရင်ပွဲကောက်ရွာ. ရှိပါတယ်.။ အဲဒီရွာကိုအစွဲပြုပြီးတော့ပွဲကောက်ရေ
တံခွန်လို့ ခေါ်ခဲ့ကြတာထင်ပါတယ်..။ ဟိုးဘက်ဆက်သွားရင်.Second Yearဘ၀က ပြည်သူ့ဘ၀လေ့လာရေး
ထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့.. ဆေးတစ်လုံးရွာ.ပင်လိန်ရွာ.. ညောင်ကုန်း၊သက္ကံ..မိုးကြိုးပစ်.. ဒီဘက်ကမြို့နဲ့ဆက်သွားပြီ..။
ဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်း .. ဘုရားကိုကျော်လာတာနဲ့..ထုံးဘို.၊ စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ မော်ဒယ်မြို့သူရိုက်သွား
တဲ့..ပင်လိန်.၊ အင်းယား ၊ ကျည်းကိုင်၊ သင်္ဂတုံ..၊ ဖာ့သင်း..၊ အင်းပုတ် ၊ ညောင်နီ..။ (ရွာနာမည်တွေအလွတ်
ရရုံတင်မကဘူး..၊ အကုန်ရောက်ဖူးသဗျ. ၊ SRP , LRP တွေတုန်းကပေါ့ဗျာ...)ညောင်နီကျော်ရင်တော့.. ကန်တော်ကြီး နယ်နိမိတ်ထဲပြန်ရောက်လာပြီ..။
ထားပါတော့ . ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ပိတ်ချင်းမြှောင်....နဲ့ တရုတ်ဘုံကျောင်းလို့အလွယ်ခေါ်
ကြတဲ့ တရုတ် ငါးပါးသီလ သတ်သတ်လွတ်ကျောင်း...။ဒီနှစ်နေရာကျန်ပါသေးတယ်..။ အဲဒီတော့ .ဘယ်ကို
အရင်သွားမလဲ ဆိုတော့ ဟိုဘက်ကိုနီးနေပြီဆိုတော့ ပိတ်ချင်းမြှောင်ကိုအရင်သွားကြတာပေါ့ဗျာ..။
ပိတ်ချင်း မြှောင်က ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားရင်.၀က်ဝံရွာဖြစ်ပါတယ်..။၀က်ဝံဟိုဘက်က ခြေမြစ်ပင်ရွာကို
ကျော်ရင်. မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဆုံးပြီး.. ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)ကို ၀င်မှာဖြစ်ပါတယ်..။ နောင်ချိုမြို့
နယ်က စပါတယ်..။ ထားပါတော့ ပြောချင်တာတွေလွဲကုန်ပြီ..။ အဲဒီဝက်ဝံရွာကိုရောက်ခါနီး လမ်းရဲ့ဘယ်
ဘက်မှာ.. ပိတ်ချင်းမြှောင် မဟာနန္ဒမူလိုဏ်ဂူတော် လို့ရေးထားတဲ့ မုခ်ဦး အကြီးကြီးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒီကနေ အထဲကိုတော်တော်ဝင်ရပါတယ်..။ လမ်းကလည်းကုန်းဆင်းကြီးပါ..။ဂီယာကြီးနဲ့ဆင်းရပါတယ်.။
တော်တော်လေး ၀င်မှာ ပိတ်ချင်းမြှောင်ကိုရောက်ပါတယ်ခင်ဗျား...။
ရောက်တာနဲ့ စမြင်ရမှာက . ကျောက်နံရံအမြင့်ကြီးတွေပါ..။ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.။ငယ်ငယ်
ကလေးလေးတုန်းက အဲဒီကျောက်နံရံကြီးတွေကို မြင်ပြီး ..အော်ခဲ့တာကိုသတိရတယ်.. ။ ဘာ့ကြောင့်ရယ်
မဟုတ်ဘူး .. ။ မြင်တာနဲ့ကို လန့်နေတာ....။ ဘာလို့လန့်တာလဲဆိုတာကိုတော့ ခုထိစဉ်းစားမရပါဘူး..။
အဲဒီကနေ ကွေ့လိုက်တာနဲ့ဈေးဆိုင်တန်းတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်..။ ဆိုင်ကယ် ကား ..။ ဘာညာအပ်
အဲဒီဂူမ၀င်ခင်မှာ ဘယ်ဘက်မှာ.. (ရေတံခွန်ဘက်မှာ) ရေဆော့လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေရှိပါတယ်.. ။
ရေကူးကန်လိုနေရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်..။ ငယ်ငယ်တုန်းက ရေတစ်ခါနစ်ဖူးတဲ့နေရာလေး လည်းရှိ
ပါတယ်.. ။ ဓါတ်ပုံကတော့ ရှာမရတော့ပါဘူး..။း)
တကယ်တမ်းကအရှည်ကြီးပါ.. ကျွန်တော်လည်းရှိတဲ့ပုံပဲတင်ရတာဆိုတော့ ရှာတာကိုမတွေ့နိုင်ဘူး
ဖြစ်နေပါတယ်..။ ဒါတောင် Google Earth ကနေ မ လာတာပါခင်ဗျာ..။
အထဲမှာ ဘုရားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်.. ။ ကျောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အရုပ်တွေအများကြီးပါ..။
ဒါပေမယ့် ပုံရှာမရလို့ တင်မပေးနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်..။
ဒါကတော့ အပြင်ဖက်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ဟိုးဘက် မှာတွေ့ရမယ့် ရေတံခွန်ပါ..။ သိပ်လှတယ်..။
ကျွန်တော် ရေတံခွန်ကိုသိပ်သဘောကျတယ်..။ ရေကျသံက လူကို လန်းစေသလိုပဲ..။ မေမြို့ကလည်း
ရေတံခွန်သိပ်ပေါ တယ်ဗျာ...။ အပန်းဖြေစခန်းမဟုတ်တဲ့ ရေတံခွန်တွေဆိုတာ ရွာတွေမှာ အများကြီးပါပဲ..။
ပိတ်ချင်းမြှောင်က မရောက်တာ ၆ နှစ်လောက်ရှိပြီ..။ နဲနဲလှမ်းတာနဲ့ မသွားဖြစ်တာပါ..။ အခုဆို
ရင်စေတီအသစ်တွေနဲ့. ဂူတစ်ပေါက်လည်း အသစ် ရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်.။ ဟိုတစ်နေ့က ဂန္ဒ၀င်ဆည်း
ဆာလေးက ဂူပေါက်အသစ်ရှေ့မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာကိုပို့လိုက်ပါတယ်...။
(ပုံစံကတော့ခပ်မိုက်မိုက်ပဲ.. မုန့်ကိုက တစ်ဖက်ကကိုင်ထားသေးတယ်.. အနော်ရထာပခုံးပေါ်မှာတောင်
ကဲ .. ပိတ်ချင်းမြှောင် ကို ဒီမှာ တင် နိဌိတံကြစို့...။ မြို့ထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား..။
တော်ပြီဗျာ..လမ်းမှာ ဘာရှိတယ် ညာရှိတယ်မရေးတော့ပါဘူး..။ ရေးရင်လည်း ပြင်ဦးလွင်ဋီကာက ပြီး
ဟုတ်ပီ. . တရုတ် ငါးပါးသီလ သတ်သတ်လွတ်ကျောင်းဆိုတာက...ပြင်ဦးလွင်မြို့ကလူတွေတရုတ်
ဘုံကျောင်းလို့အလွယ်ခေါ်ကြပါတယ်...။တကယ်တမ်းက တရုတ်ဘုံကျောင်းဆိုတာက . ညံတောရပ်ကွက်
ထဲမှာရှိတာပါ..။ အဲဒီဘုံကျောင်းက သတ်သတ်မလွတ်ပါဘူး.. ။ အခု ကျွန်တော်ပြောမယ့် ကျောင်းက
ငါးပါးသီလ သတ်သတ်လွတ်ကျောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်..။ (မြန်မာ ငါးပါးသီလနှင့်တူမတူတော့မသိပါခင်ဗျား.)
အထဲမှာ ကိုးကွယ်သောရုပ်ပွားတော်များကတော့.. တရုတ်ပုံစံများသာဖြစ်ပါတယ်..။ ဥပမာ .ကဿပ ဘုရား
က မုတ်ဆိတ်ကျင်စွယ်နှင့်..တရုတ်ပညာရှိပုံစံ.. ။အရိမေတ္တေယျ ဘုရားကလည်း.. ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့် တရုတ်ဘုရား
တရုတ်ဘုရားကျောင်း(ခေါ်ရတာရှည်လို့..) ထဲက ဘုံ(၇)ဆင့် အဆောက်အအုံ..
ပရီးမီးယားလိဂ်ကခြင်္သေ့ကြီး.. ။(ကြုံလို့ပြောတာပါ.. မန်းမှာတော့ မင်းသီဟ ပဲကိတ်ဆိုပြီး ဒီတံဆိပ်ကြီးနဲ့ဗျ)
ကဲ .. လိုက်ပို့စရာတွေလည်းကုန်ပါပြီ..။ လူလည်းမောသွားပြီ..။ မိုးလည်းလင်းခါနီးပါပြီ..။
ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်ဖူးသူများအလွမ်းပြေနဲ့.. မရောက်ဖူးသူများ အညှော်ခံ ဖို့ တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်
အမြဲတမ်း နွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေပါတယ်..။ ပြင်ဦးလွင်မှာလည်ပတ်ဖို့ ဘယ်အချိန်တွေကိုသင့်တော်
တယ်ဆိုတာလည်း အရှေ့က အမှတ် ၁ မှာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီနော်..။ ချစ်တဲ့ပြင်ဦးလွင်..ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို
ထုတ်ဖော်ပြီးလို့ မေမြို့(သို့)ပြင်ဦးလွင် အကြောင်းကိုတော့ စာတွေ့သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်..။
လာလည်း လည်ပတ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်..။ ကျွန်တော့်ဆီလည်း လာလည်ပေါ့..။ အိမ်လိပ်စာက...
အင်း..ပေးရမလားမသိဘူး....သူ နဲ့ တိုင် ပင် လိုက် ဦး မယ်................။
Posted by မိုးသက် at 1:32 PM4comments Read more